Uwe eji ajị anụ → Nkwalite uwe • ihe ịchọ mma kọmputa P&M
Gbafuo ọ bụ ụdị ejiji a ma ama na-abụkarị ihe na-adịgide adịgide ọrụ ma ọ bụ uwe mgbasa ozi, na-ekwe ka nnwere onwe ịgagharị karịa jaketị, ebe ị na-echebe uwe nke onye ọrụ.
Uwe bụ ezigbo ngwaahịa maka ịkpụzi kọmputa
Ọ bụ uru ndị a na-eme ka ajị anụ na-ewu ewu n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ha bụ nhọrọ dị iche iche maka ndị ọrụ, n'etiti ndị ọzọ, na mmepụta, logistics na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, kamakwa maka ebumnuche onwe ya dịka uwe bara uru ma dị ọkụ maka ọrụ dị iche iche.
Ọkpụkpụ ụmụ nwoke Adler 506 nwere ike ịnweta akwa ọ bụla
Nnukwu ụdị ajị anụ dị na nke anyị ụlọ ahịa na-abata na palette mara mma.
N'ihi nke a, ị nwere ike ịgbanwe nhọrọ gị iji kọwaa ya na agba nke ụlọ ọrụ.
Ọzọkwa, maka ahaziri gị ọmarịcha ma mara mma, ịnwere ike ịtụ maka ebumnuche a na-agba ihe mkpuchi kọmputa. Anyị na-ere ụdị ụmụ nwanyị, nke ụmụ nwoke, ụmụaka na nke unisex n'ụdị dịgasị iche.
Gaa na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị >>
Gbalaga dị ka nhọrọ ugboro ugboro maka uwe ejiji
Jaketị freyce dị na ụlọ ahịa anyị bụ ndị ụlọ ọrụ dịka Reis na Leber & Hollman.
Anyị na-enye ọtụtụ nhọrọ nke ụdị dabere na mmasị onye ọ bụla - zipụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ kwadebere naanị ya na zipa dị mkpụmkpụ n'olu, ma ọ bụ na-enweghị mkpuchi.
Egosiputara otutu otutu ihe eji eme ihe eji aru oru ike, nke n’echebe megide oria, ima atu mgbe ichoro n’èzí ma obu nihe di nfe (rue nwa oge, n’ihe banyere oru n’ime onodu odi ala mgbe nile. uwe maka ụlọ ahịa oyi na nju oyi).
Otutu swatshirts sitere na ngwa ọgụ anyị nwere akpa akpa aka bara uru, ọkachasị nwere ekele maka ọnọdụ ọrụ.
Anyị na-enyekwa ajị anụ na agba na ịdọ aka ná ntị na ihe na-egosipụta, nke kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ, ndị na-arụ ọrụ na-ewu ụgbọ mmiri, ụdị nyiwe na ụgbọ mmiri niile. Offọdụ swatshirts nwere ihe ndọtị n'úkwù, na-enye ohere ọ bụghị naanị imeghari sweatshirt na ụdị dị iche iche, kamakwa ọnọdụ ihu igwe.
Mpempe ngwa ahịa na-agba ọsọ
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ekele maka ya aha mmadu ya na onwe ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ nnọchite anya na kọntaktị na ndị ọrụ ngo na ndị ahịa nwere ike.
Usoro eji akara akara kọmputa na uwe
Ọ bụ n'ihi nke a na ajị anụ edepụtara bụ ihe eji ewu ewu maka uwe maka ụdị ihe omume dị iche iche, nnọchite nnọchite anya, nnọkọ na ọzụzụ.
Mgbe ị na-ewu ihe a na-enye, anyị echefughị nke-ntà. N'ime ụlọ ahịa anyị ị ga-ahụ ajị anụ ụmụaka maka agba dị iche iche na nha. Anyị na-eme akwa akwa na akara akara nke ụlọ akwụkwọ na klọb maka ha.
Ọsọ na Uwe bụ ngwaahịa kachasị ahọrọ maka ịkọwapụta ma ọrụ ma uwe mgbasa ozi.
Anyị na-akpọ gị òkù ka anyị ụlọ ahịa, ebe ị ga-ahụ ụdị ọrụ zuru ezu na anụrị mgbasa ozi.
Ajị anụ 4fadler ajị anụakpukpo nwanyi nwanyiajị anụ kacha mmaajị ajị anụajị anụajị anụ ụmụ nwanyịtinyere ajị anụ ndị buru ibuCelọ ọrụ LadiesUmu nwanyi jiri ajirija kpuchie yaajị anụ maka ụmụakajaket ajị anụ maka ụmụ agbọghọajị anụ maka ndị ọrụụlọ ọrụ anụrịndewoajị anụ nwokeụmụ nwoke si n'azu njikwaụmụ nwoke na-arụ ọrụajị anụ na-arịọ arịrịọajị anụ na-egbuke egbukeonye na-emeputa ajị anụmgbasa ozi anụrịajị anụ na-arụ ọrụọrụ ajị anụ Allegroụdị anụ ọhịa ndị mara mmaanụ agba ọkụajị anụ aghaajị anụ na ajị anụajị anụ ya na akaraajị anụ na akara ụlọ ọrụajị anụ na mbipụtaajị anụ a na mbipụta nke ụlọ ọrụajị anụ dị ọnụ ala